Nayakhabar.com: भूकम्प पिडित त्रिपालभित्रको बास, खाने छैन गाँस, सरकार बर्खाको झरी कसरी थेक्ने ?
भूकम्प पिडित त्रिपालभित्रको बास, खाने छैन गाँस, सरकार बर्खाको झरी कसरी थेक्ने ?
काठमाडौं । घर भत्कँदा पुरिन नसकेर धन्नै बाँच्यो जीवन। जीवन त बाँच्यो तर यसलाई निरन्तरता दिन निकै कठिन भएको छ।’ यो पीडा चन्दननाथ नगरपालिका–२ जुम्लाका दुधकला कुलालको हो।
गत वर्षको भूकम्पले कुलालको घर चर्केको थियो। गरिबीका कारण उनका परिवारले घर मर्मत गर्न सकेनन्। त्यही चिरा परेको घरमा एक वर्षदेखि उनीहरुको बास थियो। आफ्नो दिनचर्या त्यही जीर्ण घरमा काट्दै आएका उनीहरु एक सातादेखि त्रिपालको बास बस्न बाध्य छन्। यही असार मसान्ततिर परेको भारी वर्षाले कुलालको घर भत्कियो। संयोगवशः घर भत्कँदा हामी परिवार बाहिर रहेछौँ, घर पूर्णरुपले क्षति भयो, भगवान्का दयाले हामी बाँच्यौँ,कुलालले भने।